आजको राशिफलः यी ४ राशिका लागि शुभ छ दिन – List Khabar
Home / राशिफल / आजको राशिफलः यी ४ राशिका लागि शुभ छ दिन
आजको राशिफलः यी ४ राशिका लागि शुभ छ दिन
admin4weeks ago राशिफल Leaveacomment 104 Views
२०७८ जेठ ११ गते मङ्गलबार
मेष:- स्वास्थ्य कमजोर हुनेछ। जग्गा र भवन निर्माणको योजना बनाइनेछ। बेरोजगारी हट्नेछ। फाइदा हुन्छ। प्रतिष्ठा अस्वीकार हुनेछ। कार्य गर्न अवरोध हुन सक्छ। व्यर्थका कर्मचारीहरुलाई शंका नगर्नुहोस्।
मेष:- शत्रुहरू सक्रिय रहनेछन्। जग्गा र भवन निर्माणको योजना बनाइनेछ। बेरोजगारी हट्नेछ। फाइदा हुन्छ। प्रतिष्ठा अस्वीकार हुनेछ। कार्य गर्न अवरोध हुन सक्छ। व्यर्थका कर्मचारीहरुलाई शंका नगर्नुहोस्। आर्थिक अवस्थामा कम्जोर रहला ।
वृष:- रचनात्मक कार्य सफल हुनेछ। व्यापार ठीक छ। खुशी हुनेछ जीवनसाथीको स्वास्थ्यबारे चिन्ता हुनेछ। परिवारको उन्नति हुन्छ। तपाईं रमाइलो यात्रा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। विवेकका साथ काम गर्नु फाइदाजनक हुनेछ।
मिथुन:- दीर्घकालीन रोग देखा पर्न सक्छ। दु:खद समाचार फेला पार्न सकिन्छ। दौडधुप हुनेछ । जोखिम र संपार्श्विक कामबाट बच्नुहोस्। अधूरा कामहरूले गति प्राप्त गर्दछ। व्यापार गोपनीयता उल्लंघन नगर्नुहोस्। गीत र संगीतमा चासो बढ्नेछ।
कर्कट:- यात्रा सफल हुनेछ। प्रयासहरू सफल हुनेछन्। बोलीमा नियन्त्रण गर्नुहोस् घर बाहिरबाट सोधपुछ हुनेछ। फाइदा हुन्छ। व्यापार मा प्रगति को संभावनाहरु छन्। बोलीमा संयम आवश्यक छ। जीवनसाथीले सहयोग पुर्‍याउँछन्। सामाजिक ख्याति र सम्मान बढ्नेछ। स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ।
सिंह:- पुराना साथीहरू र आफन्तहरूलसँग भेट हुनेछ । शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। व्यापार ठीक छ। मान बढ्नेछ। काममा स्वैच्छिक पदोन्नतीको सम्भावना छ। कसैको आलोचना नगर्नुहोस्। खानामा ख्याल राख्नुहोस्।
कन्या:- रोजगार पाउने छ। व्यापार यात्रा सफल हुनेछ। त्यहाँ अप्रत्याशित लाभहरू हुन सक्छन्। काममा अधिकार बढ्नेछ। व्यापार समस्या समाधान हुनेछ। नयाँ योजनामा नाफाको सम्भावना छ। मांगलिक कार्य घरमै गर्न सकिन्छ। जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध नजिक हुनेछ।
तुला:- वैभवमा खर्च हुनेछ। स्वास्थ्य कमजोर हुनेछ। बहुमूल्य चीजहरू सुरक्षित राख्नुहोस्। राज्य कार्यमा परिवर्तन गरिनेछ। आलस्य छोड्नुहोस् तपाईंको कार्यको मानिसहरूले प्रशंसा गर्नेछन्। व्यापार लाभदायक हुनेछ। नयाँ कार्य योजना को योग जोडदार छन्।
वृश्चिक:- लेनदेनमा सावधान रहनुहोस्। डुबेका रकम असुलीका प्रयासहरू सफल हुनेछन । व्यापारिक यात्रा अनुकूलित गरिनेछ। कानूनी मामिलाहरुमा सुधार हुनेछ। पैसा प्रबन्ध गर्नमा समस्या हुन सक्छ। आहार अनियमितताहरू वेवास्ता गर्नुहोस्। व्यापार र रोजगारीमा उन्नति हुनेछ।
धनु:- राजमान प्राप्त हुनेछ। त्यहाँ नयाँ करार हुनेछ। नयाँ योजना बनाइनेछ। व्यापार ठीक छ। खुशी हुनेछ काममा धेरै खर्च हुनेछ। विवाहित जीवनमा भावनात्मक समस्याहरू हुन सक्छन्। व्यापार मा आज नयाँ सम्झौता नगर्नुहोस्।
मकर:- मन ध्यान पुजामा व्यस्त हुनेछ। सरकारी र अदालतको काम सम्हाल्नेछ। त्यहाँ नाफाका अवसरहरू छन्। पारिवारिक समस्याहरूले मानसिक समस्या निम्त्याउँछ। एक धैर्य र धैर्य संग काम गर्नु पर्छ। आज यात्रा नगर्नुहोस्।
कुम्भ:- दीर्घकालीन रोग देखा पर्न सक्छ। चोटपटक र दुर्घटनाबाट बच्नुहोस्। सामानहरु सुरक्षित राख्नुहोस्। बाँकी सामान्य हुनेछ। व्यापार सामान्य हुनेछ। दूरदृष्टि र बुद्धिले भरिपूर्ण तरिकाले कठिनाइहरू पार गर्न सकिन्छ। राज्य र व्यापार मा सफलता को संभावना छ। पढ्नको लागि रुचि बढ्नेछ।
मीन:- वैवाहिक प्रस्ताव पाउन सकिन्छ। सरकारी र अदालतमा अनुकूलता हुनेछ। आय हुनेछ, सन्तानको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्। परिवारको संग, दिन उत्साहका साथ खर्च हुनेछ। योजना गरिएको रूपमा काम गर्नेबाट नाफाको सम्भावना छ। वित्तीय बल रहनेछ।
Previous आज मंगलबार हिन्दु धर्मअनुसार किन गणेश भगवानको पूजाआराधना गरिन्छ ? पढेर एकएक सेयर गर्नुहोला !
Next मा`सुमा भन्दा बढी प्रोटिन हुने बहुगुणी झुसे करेला, जसकाे सेवन बाट हुने यि अपत्यारिला फाइदाहरु, जान्नुहाेस् !